China Yakazara Steel Dome Head Bofu Rivet fekitori nevagadziri | Yuke
Yakazara Steel Dome Head Bofu Rivet
MaRivets ndeechigarire, asina-tambo akasungirirwa anosunga zvinhu pamwechete. Izvo zvinosanganisira musoro uye shank, iyo yakakanganiswa nechombo chekubata rivet panzvimbo. Mabofu rivets anewo mandrel, ayo anobatsira kupinza rivet uye anotsemuka mushure mekuiswa.
Yakazara Steel Dome musoro bofu rivet isimbi yekubatanidza ine yakasarudzika chimiro uye yakakwirira riveting simba, uye ndeyezvikamu zvitsva zvekusimbisa. Iine simba rakakwirira rekumanikidza uye kugera.
Material: Muviri Wesimbi/Simbi Dzinde
Surface Kupedzisa: Zinc yakaputirwa / Zinc Yakaputirwa
Standard: IFI-114 uye DIN 7337, GB. Non-standard
Ruzivo rweDome Head Blind Rivet
3.Kushandisa: Elevator, kuvaka, kushongedzwa, fenicha, indasitiri.
5.Kukwanisa Kugadzirwa: 500 Matani / Mwedzi
9.QC (kuongorora kwose kwose) Kuzviongorora kuburikidza nekugadzirwa
1.Shanda zvakanaka nezvinhu zvinyoro. kupa yakakura inotakura nzvimbo yekutsanya.
2.Provide yakakura inotakura nzvimbo yekusimbisa yakapfava uye brittle inotarisana nezvinhu uye maburi akatarisana nemakomba.
3.Kuwedzera flange dhayamita inodzivirira kuvimbika kwechikumbiro.
Nguva Yekutungamira: 15 ~ 20 Zuva rekushanda re20' Container. 5 mazuva kana uine stock.
1.Tiri fekitari, saka tinogona kuzvimiririra mukugadzira zvigadzirwa, chero nguva, chero kupi, tinogona kukupa zvinhu panguva yakakodzera.
2. Panguva yemutengo wefekitari, unogona kuchengetedza mari yakawanda kutenga zvimwe zvinhu.
3. Hunhu hunovimbiswa, tine seti yakazara yekuongorora michina.
4. Fekitari yekushanyira inogamuchirwa noushamwari, shure kwezvose, kuona kutenda.
5. Sample inogona kupihwa nemahara.
6.Kupfuura 10 makore ruzivo rwekugadzira, vashandi vehunyanzvi, mukurumbira unoshamisa uchitiita kuti tichengete kirasi yekutanga.
Zvakapfuura: Aluminium Steel Dome Head Bofu Rivet
Zvinotevera: Yakazara Aluminium Dome Head Blind Rivet
Musoro wakatsetseka wakazara hex muviri rivet nzungu
Mvura isina Anodized Marine Pop Rivets
Stainless Simbi Yakavharwa Mukombe Rivets